China Easy echichi strand kpara achara n'èzí flooring rụpụta na Factory | Achara ọlaedo
Osisi achara achara nwere udiri achara mara nma ma nye ebe obula di n’ile anya. Ejiri ahịhịa ogologo ya, ya na ọfụma ziri ezi (ọ nwere ike ịbụ ọla, osisi, achara) setịpụrụ, REBO achara decking nwere ike ịwụnye ngwa ngwa site na iji nchara igwe anaghị agba nchara na kposara, otu akụkụ iji jikọta ya na ibe ahụ, nke ọzọ n'akụkụ iji jikọta ya na decking.
REBO® na-eji ọtụtụ usoro pụrụ iche iji meziwanye ike, nkwụsi ike akụkụ, ọkụ ọkụ na ogologo oge na ọkwa dị elu, ma nọgide na agba ya, yana ọdịdị nke osisi siri ike. Osisi achara achara nwere udiri achara mara nma ma nye ebe obula di n’ile anya. Achara aghọwo otu n'ime ụlọ ewu ewu na-ewu ewu, na-enye ọtụtụ ụdị, agba, na usoro ojiji dị iche iche.
Rebo eriri a kpara akpa bụ ezigbo ihe obibi na ụlọ na-adịgide adịgide. REBO na-eji usoro patented pụrụ iche iji mee ka isi ike, nkwụsi ike akụkụ, na ogologo oge nke decking dị elu. Ultro-elu okpomọkụ 220 ℃ ọgwụgwọ dị oke ọkụ na-agbanwe usoro molucular nke eriri bamboo, iji kwe nkwa ero, nsị ikpuru na nri na-ewepụ ma gosipụta ya na oke nla, mgbochi mmebi ahụ na mgbochi ebu. Ọ na ọtụtụ-eji n'ụlọ, nkwari akụ, ọrụ, square, n'okporo ámá, ụlọ akwụkwọ, Amọraịt, wdg
Osisi achara achara nwere udiri achara mara nma ma nye ebe obula di n’ile anya. Ejiri ahịhịa ogologo ya, ya na ọfụma ziri ezi (ọ nwere ike ịbụ ọla, osisi, achara) setịpụrụ, REBO achara decking nwere ike ịwụnye ngwa ngwa site na iji nchara igwe anaghị agba nchara na kposara, otu akụkụ iji jikọta ya na ibe ahụ, nke ọzọ n'akụkụ iji jikọta ya na decking. Ya mere enwere ike ijide decking ahụ. Nke a na usoro azọpụta oge na belata na-eri nke oru iji wụnye decking mbadamba
Nke gara aga: Ọdịdị dị elu dị elu na-eguzogide ọgwụ achara n'èzí
Osote: E1 Eurpean ọkọlọtọ eco-friendly achara flooring n'èzí